नेपाल आइडल सिजन २ को फाइनलमा पुगेका २ प्रतिष्पर्धीबीच झापामा लफडा, भिडियोसहित — Sanchar Kendra
नेपाल आइडल सिजन २ को फाइनलमा पुगेका २ प्रतिष्पर्धीबीच झापामा लफडा, भिडियोसहित
काठमाडौं । नेपाल आइडल सिजन–२ को फाइनलमा रहेका २ प्रतिष्पर्धीबीच झापामा लफडा भएको छ । भोट माग्न गृहजिल्ला पुगेका अस्मिता अधिकारी र सुमित पाठकबीच लफडा भएको छ । हिजो (शनिबार) विमानस्थलबाट बजार आउँदा सुमितको गाडीमा अस्मिता चढेपछि लफडा सुरु भएको बताईएको छ ।
खासमा सुमितले गाडीमा अस्मितालाई बस्न दिएपनि पछि फ्यानहरुसम्म पुग्दा उनले आफ्नो गाडीमा बस्न नदिएपछि तनाव उत्पन्न भएको थियो । अस्मिता र सुमित दुवै झापाकै हुन् । उनीहरुले गृह जिल्लामा सकर्थकसँग भेटघाट र भोट माग्न गएका थिए । तर, सुमितको व्यवहारले लफडा भएको अस्मिताका समर्थकले बताएका बताएका छन् । सुमित र अस्मिताका कारण फ्यानहरुबीच झन्डै कुटाकुट भएको थियो ।
पछि प्रहरी आएपछि सबै आ-आफ्नो बाटो लागेका थिए । यो लफडाले दुवै प्रतिस्पर्धीबीचको सम्बन्धमा पनि चिसोपन आएको बताईएको छ । यसैबीच सुमित र अस्मितालाई गृह जिल्ला झापामा भव्य स्वागत गरिएको छ ।
दिउँसो १२ बजे भद्रपुर विमानस्थलमा उत्रिएका सुमित र अस्मितालाई विमानस्थलमै भव्य स्वागत गरिएको थियो । उनिहरुको स्वागतमा शुभचिन्तक तथा आफन्तहरु विमानस्थल पुगेका थिए । हातमा फूलमाला बोकेर लामबद्ध लागेका शुभचिन्तकहरुले उनिहरुको स्वागत गरेका थिए ।
सुमित र अस्मिताका आ-आफ्नै फ्यानहरुले लगाएको हुटिङ्ले माहोल तातेको थियो । उनिहरुका आ-आफ्नै फ्यानहरु सेल्फि खिच्न ब्यस्त देखिन्थे । उनिहरुसँग अंकमाल गर्न र फोटो खिच्न तछाड मछाड भएको थियो ।
सुमित झापाको सुरुङाबासी हुन् भने अस्मिता कमल गाउँपालिकाबासी हुन् । उनीहरुलाई भोट माग्न झापाका विभिन्न स्थानमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।
यसैबीच जारी नेपाल आइडल सिजन–२ मा अब एक हप्तासम्म भोट गर्न पाइने भएको छ । बिहीबार हुने प्रस्तुतिपछि हप्ता दिनका लागि भोटिङ खुल्ला रहने भएको हो । यस अगाडिको प्रस्तुतिमा १८ घण्टाका लागि मात्र भोटिङ खुल्ला हुँदै आएको थियो।
खासमा के भएको थियो त ? इपुर्वबाट लिइएको तलको भिडियो हेर्नुस् ।
यता नेपाल आइडल सिजन–२ को फाइनलमा पुग्न सफल रवि ओडले भने सबै ठाउँबाट धेरै माया र समर्थन पाइरहेकोमा सबैप्रति आभार प्रकट गरेका छन् ।
रविले सबै ठाउँमा पुग्न नसके पनि चौतर्फीबाट माया पाउँदा आगामी यात्रामा बढ्न थप हौसला मिलेको सामाजिक सञ्जाल फेसुबुक मार्फत बताएका छन् । ‘साँच्चै संगीतको जात, धर्म, भाषा, सिमाना नहुँदो रहेछ । म चाहन्थेँ अछाम, बझाङ, बैतडी, धरान, पुगौँ तर मसँग समय पटक्कै थिएन ।’ उनले लेखेका छन्- ‘मसँग समय थियो भने पोखरा, दाङ, सुर्खेत, जनकपुर, बिरगन्ज, चितवन, हेटौंडा सबैतिर पुग्थे । ज्यान पुर्याउन नसके पनि देशका सबैठाउँमा मन पुर्याएको छु । विदेशका सम्पूर्ण शुभचिन्तकसँगै छ मेरो मन । तर म यहाँहरूलाई वचन दिन्छु, म यहाँहरूको माया सम्झेर आउने छु ।’
यस्तो छ उनको फेसबुक स्टाटस जस्ताको त्यस्तै- ‘आदरणीय मेरा प्रियजनहरू, आफन्तहरू, देश विदेशमा रहेर मलाई माया गर्नुहुने मेरा शुभचिन्तकहरू, यहाँहरूलाई मेरो हार्दिक -हार्दिक नमस्कार !
हजुरहरूको मायाले मलाई आज यस्तो बिन्दुमा ल्याइपुर्याएको छ कि मसँग त्यसको व्याख्या गर्नसक्ने कुनै शब्द नै छैन । म एउटा समान्य मान्छे, मलाई थाहा नै छैन म कहिलेदेखि संगीतप्रति मोहित भएको हुँ । तर, मलाई यति चाहिँ थाहा छ, म कुरा बुझ्ने हुँदा गीत गाउन सिकिरहेको थिएँ ।
हामी चार जनालाई नेपाल आइडलले केही महिनापछि आ–आफ्नो घरगाउँ पठाएर ठूलो उपकार गरेको छ । हामीले यति धेरै माया पाएका छौँ, त्यो हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ । यसको सम्पूर्ण श्रेय नेपाल आइडललाई जान्छ ।
पाँच महिना अगाडिसम्म काठमाडौं र आफ्नो जन्मथलो सुदूरपश्चिम ओहोरदोहोर गर्दा म एक्लै थिएँ । मलाई नेपाल आइडलले आफूसँग लगेर पाँच महिनासँगै राखिसकेपछि म साँच्चै अर्कै भएछु । यसका लागि मैले नेपाल आइडललाई जति धन्यवाद दिए पनि कम हुन्छ ।
मैले मेरो गृह जिल्ला सुदूरपश्चिम मा पाइला टेक्दा पहिलोपल्ट महसुस गरेँ साँच्चै जनताको माया कस्तो हुँदो रहेछ जसले अहोरात्र खटेर मलाई टप १२ बाट ‘टप ४’ मा ल्याउनुभयो उहाँहरूको मायाको बदलामा म के दिउँ ?
साँच्चै संगीतको जात, धर्म, भाषा, सिमाना नहुँदो रहेछ । म चाहन्थेँ अछाम, बझाङ, बैतडी, धरान, पुगौँ तर मसँग समय पटक्कै थिएन । मसँग समय थियो भने पोखरा, दाङ, सुर्खेत, जनकपुर, बिरगन्ज, चितवन, हेटौंडा सबैतिर पुग्थे ।
धनगढी, लम्की, तरिया, झलारी आदि ठाउँहरूमा मैले साह्रै थोरैबेर मात्र समय दिन पाएँ तर मेरो प्रतिक्षामा घण्टौँ चिसो सहेर बस्नुहुने मेरा तमाम प्रियजनहरूलाई म के दिउँ ? यो छोटो समयमा दशदश मिनेटको लागि म जहाँ जहाँ पुगेँ उहाँहरूले गर्नु भएको सभ्य व्यवस्थापन र लखौँको भिड जो नितान्त मेरा लागि थियो त्यो देखेर म पग्लिएँको छु ।
अझै पनि सम्झिएर भावुक भइरहेको छु । साँच्चै संगीतको जात, धर्म, भाषा, सिमाना नहुँदो रहेछ । म चाहन्थेँ अछाम, बझाङ, बैतडी, धरान, पुगौँ तर मसँग समय पटक्कै थिएन । मसँग समय थियो भने पोखरा, दाङ, सुर्खेत, जनकपुर, बिरगन्ज, चितवन, हेटौंडा सबैतिर पुग्थे ।
ज्यान पुर्याउन नसके पनि देशका सबैठाउँमा मन पुर्याएको छु । विदेशका सम्पूर्ण शुभचिन्तकसँगै छ मेरो मन । तर म यहाँहरूलाई वचन दिन्छु, म यहाँहरूको माया सम्झेर आउने छु ।
म यतिखेर नेपाल आइडलको फाइनलमा छु । अब एक साताको लागि भोटिङ लाइन खुल्दैछ । मलाई यहाँहरुले धेरै दिइसक्नु भएको तर अब यो अन्तिम पटक हो । मलाई नेपालको दोस्रो नेपाल आइडल बनाउन अब हजुरहरू बाहेक अरु कसैले सक्दैन । त्यसैले यहाँहरूको शरणमा छु, अन्तिम एकचोटी हार्दिक -हार्दिक अनुरोध गर्दछु । हजुरहरूको प्रिय, रवि ओड..’
लायन्स क्लब मल्टिपलबाट इन्द्र कार्की र संगीता शर्मा सम्मानित